Njem nlegharị anya Jamaica na -enye ndị ọrụ afọ ofufo Olympic nke Japan onyinye ezumike okomoko
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Njem nlegharị anya Jamaica na -enye ndị ọrụ afọ ofufo Olympic nke Japan onyinye ezumike okomoko
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Njem nlegharị anya Jamaica na -enye ndị ọrụ afọ ofufo Olympic nke Japan ụgwọ ọrụ.
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica Hon. Edmund Bartlett ekwuputala na ndị otu ndị njem nlegharị anya nke Jamaica site n'enyemaka nke ndị na-ahụ maka mpaghara ga-enye ndị ọrụ afọ ofufo Olympic nke Japan, Tijana Kawashima Stojkovic, na onye ọbịa nke ọ họọrọ, njem pụrụ iche a na-akwụ ụgwọ na Jamaica. Njem a, nke gụnyere parish anọ, ga -agụnye nleta ebe nlegharị anya yana ịnọ na họtel okomoko ise.
Tijana nyere onye Jamaica Hurdler Hansle Parchment aka n'egwuregwu Olympic na Tokyo, Japan.
Mgbe ọ na-aga asọmpi ọkara ikpeazụ ya, Parchmnet na-ewere ụgbọ ala Shuttle na-ezighi ezi nke ndị nhazi ihe omume nyere.
Stojkovic nyere Parchment 10,000 yen (ihe karịrị naanị $ 90) ka ọ kwụọ ụgwọ maka ụgbọ njem gaa n'egwuregwu Olympic na Tokyo na Tuesday, Julaị 3.
Enyere ọkpụkpọ òkù a na Stojkovic dị ka ngosipụta ekele maka inyere Jamaica Hurdler na onye nzere ọlaedo Olympic, Hansle Parchment, aka iru n'egwuregwu Olympic maka asọmpi ọkara ikpeazụ ya, mgbe ọ nyesịrị bọs na-ezighi ezi na-aga ebe ahụ.
Ekwuputara ọkwa a n'abali ụnyaahụ (Ọgọstụ 18) n'oge emume mebere nke Jamaica Tourist Board na Embassy of Jamaica dị na Japan jikọtara ọnụ.
“Ọ na-enye m ọ pleasureụ dị ukwuu ịkpọ gị na onye ọbịa ọnụ ego niile a kwụrụ njem na Jamaica iji nweta ihe kpatara anyị ji bụrụ 'Ọkụkụ nke Ụwa.' A ga -akpọga gị n'ụlọ ọrụ onye isi oche ndị ọrụ mmanya Club na Royalton na Negril, na nlele nlele na ọmarịcha ọrụ nke ụlọ Half Moon na Iberostar na Montego Bay, "Minista Bartlett kwuru.
"Oge ezumike gị ga -akpọrọ gị na onye ọbịa gị gaa Obí Ọnwa na Ocho Rios, ị ga -enwekwa mmetụta nke Kingston na nkwari akụ AC Marriott. Ọ kwụsịghị ebe ahụ, n'ihi na ị ga -enwekwa ahụmịhe zuru oke ebe ị ga -aga, nke ga -eduga gị na njem nke na -egosi ihe ụtọ na -atọ ụtọ anyị na ọdịbendị dị ebube n'etiti ọtụtụ, ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ”
Stojkovic nyere Parchment 10,000 yen (ihe karịrị naanị $ 90) iji kwụọ ụgwọ maka ụgbọ njem gaa n'egwuregwu Olimpik dị na Tokyo na Tuesday, Julaị 3, maka asọmpi agba ikpeazụ ya, mgbe ọ nwesịrị na mberede ụgbọ ala Shuttle Bus nke ndị nhazi ihe omume nyere. N'ihi enyemaka achọghị ọdịmma onwe onye, ​​Parchment nwere ike rute n'ámá egwuregwu n'oge wee tinye nke abụọ na ọkara ikpeazụ ya ma mesịa nweta nrite ọla edo na ngwụcha.
“Achọrọ m ikele gị ọzọ na ịsị ekele m nwere maka enyemaka ị nyere m n'egwuregwu Olympic na otu o si nyere m aka inweta nrite ọla edo. Emere m akụkọ [na social media] wee kesara ya ezinụlọ m, ndị enyi m, na ndị na -akwado m. Ha niile ga -ahụ ọmarịcha na obi ọma ị nwere… Anyị na -atụ anya ka ị bịa na nke anyị mara mma agwaetiti Jamaica, ka ị nwee ike ịbịa soro ezinụlọ gị kporie ndụ, ”ka Parchment kwuru.
Stojkovic kwupụtara ekele maka ọkpụkpọ òkù ahụ wee sị, "Enwere m obi anụrị maka nke a…
“Mkpebi Tijana ịbụ onye achọghị ọdịmma onwe ya naanị na inyere onye ọ na -amabughị aka bụ ihe kacha mma gbasara mmadụ. Omume ọma ya gbaghaara gburugburu ụwa wee chetara anyị na enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mma n'ụwa taa… .